Vaovao - Fampidirana ny fantsona tsy misy tohiny
Ny fantsom-bozaka tsy misy fangarony dia karazana vy lava misy fizarana poakaty ary tsy misy tonon-javatra manodidina azy. Ny fantsom-by miaraka amina faritra poakaty dia be mpampiasa amin'ny fampitana tsiranoka, toy ny fampitana menaka, entona voajanahary, entona, rano ary fitaovana matanjaka sasany. Ampitahaina amin'ny vy boribory ary vy mafy hafa, fantsom-by dia karazana vy vy ara-toekarena miaraka amin'ny tanjaka sy ny lanjany maivana kokoa. Izy io dia be mpampiasa amin'ny fanamboarana ny faritra misy ny rafitra sy ny faritra mekanika, toy ny fantsom-pitrandrahana solika, zotram-pitaterana fiara, zotram-bisikileta ary scaffold vy ampiasaina amin'ny fananganana. Ny fampiasana fantsom-by mba hanaovana faritra peratra dia afaka manatsara ny fampiasana fitaovana, manamora ny fizotry ny famokarana ary mitahiry ora ara-materialy sy fanodinana, toy ny bushing bearings.
Amin'izao fotoana izao, ny fantsom-by dia be mpampiasa amin'ny fanamboarana ny peratra sy ny palitao jack. Fantsom-by na isan-karazany fitaovam-piadiana tsy ilaina ilaina, barika basy, barika amin'ny fantsom-by mba hamokarana. Ny fantsom-by dia azo zaraina ho fantsona boribory sy endrika manokana fantsona arakaraka ny endrik'ilay faritra ampitana azy, satria ny faribolana iray manana ny faritra lehibe indrindra mitovy refy aminy, dia azo entina amina fantsona boribory ny tsiranoka bebe kokoa. Ho fanampin'izany, rehefa mitondra tsindry anatiny na ivelany ny faritra annular, ny hery dia mitovy ihany, toy izany ny ankamaroan'ny fantsom-by dia fantsom-boribory. Na izany aza, ny fantsom-by boribory koa dia misy fetra voafetra, toy ny eo ambanin'ny toedain'ny fiaramanidina fiaramanidina, ny fantsom-boribory dia tsy dia matanjaka toy ny tora-droa, ny fantsom-piolahana boribory mahitsizoro, ny rafitry ny milina fambolena sasany, Ny fanaka vy sy hazo sns, dia matetika ampiasaina amin'ny fantsom-pandrosoana mahitsizoro. Ny fantsom-by vy hafa misy endrika manokana dia takiana arakaraka ny fampiasana azy.
Araka ny fomba famokarana samihafa dia azo zaraina ho fantsom-pandehanana mafana, fantsom-pandehanana mangatsiaka, fantsom-panafody mangatsiaka, fantsona extrusion sns.
1.1. Ny fantsom-bozaka tsy misy fantsom-bolo mafana dia mazàna vokarina amin'ny fikosoham-paompy mihodina. Ilay bileta fantsom-bozaka dia notapahina ho faritra taorian'ny nanadiovana ny kilema sy ny lesoka teo amboniny
Ny halavany takiana dia ho afovoany amin'ny faran'ny faran'ny lohan'ilay fantsom-pohy, avy eo alefa any amin'ny lafaoro fanafanana mba hanafanana sy haloahana ilay mpanendaka.
Mihodina sy mandroso hatrany, eo ambanin'ny asan'ny roller sy ny loha, ny banga ao anatiny dia namorona lava-bato, fantatra amin'ny anarana hoe fantsona capillary. Avy eo alefaso amin'ny familiana mandeha ho azy
Mitohy hatrany ny fikosoham-bary.
Ny famokarana fantsom-by vy tsy voahodina mafana dia fomba mandroso.
1.2. Ho an'ny fantsom-pirinty kely kely sy tsara kalitao kokoa dia tsy maintsy raisina an-tariby mangatsiaka, sary mangatsiaka na fitambaran'izy roa.
Fomba fanaovan-jiro: mazàna no atao amin'ny milina avo roa. Ny fantsom-by dia lavaka boribory ao anaty lava-boribory misy lohany misy konesa voafaritra sy faritra mivaingana.
Mihodina afovoany. Ny sary an-tsary dia mazàna atao amin'ny 0.5 ~ 100T tokana tokana na milina fanaovana sary mangatsiaka roa.
1.3 Amin'ny fomba fitrandrahana, ny banga vita amin'ny fantsona mafana dia napetraka ao anaty varingarina fandroahana mihidy, ary ny tsorakazo perforated sy ilay tehina extrusion dia miara-mihetsika hanao
Ny extruder dia esorina amin'ny lavaka maty kely kokoa, ity fomba ity dia afaka mamokatra fantsom-by misy savaivony kely.
2. Fitsapana ny firafitry ny simika
2.1 Ny fantsom-pirazanana tsy mitongilana ao an-trano dia omena arakaraka ny akora simika sy ny toetra mekanika, toy ny fitaovana: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 Astm a106 Astm a53
Ny firafitry ny simika ao amin'ny tsia. Ny vy 50 dia hanaraka ny fepetra napetraky ny GB / T699-88. Ireo fantsom-pirazanana tsy misy fiafarana dia hozahana arakaraka ny fenitra mifandraika voalaza ao amin'ny fifanarahana.
09MnV, 16Mn ary 15MnV vy dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fepetra GB1591-79.
2.2 Jereo ny fizarana mifandraika amin'ny GB223-84 Fomba famakafaka simika ho an'ny vy sy ny firaka ho an'ny fomba famakafakana manokana.
2.3 Fanadihadiana famakafakana manondro ny GB222-84 "Famelabelarana azo ekena ny firafitry ny simika ny santionany sy ny vokatra vita ho an'ny famakafakana simika ny vy".
3. Fanaraha-maso ny fahombiazan'ny vatana
3.1 Sodina seamless anatiny omena arakaraka ny fahombiazan'ny mekanika, vy vy tsotra toy ny GB / T700-88 kilasy famokarana vy (fa tsy maintsy
Hamarino fa ny atin'ny solifara dia tsy mihoatra ny 0,050% ary ny atin'ny posiposy dia tsy mihoatra ny 0,045%), ny toetra mekanika dia tokony hifanaraka amin'ny latabatra GB8162-87
3.2 Ny fantsom-pirazanana tsy mitongilana ao an-trano omena araka ny fitsapana hydrostatic dia tsy maintsy miantoka ny fitsapana hidrostatik voalaza ao amin'ny fenitra.
3.3 Ny fizahana ara-batana ny fantsom-pitaterana seamless import dia hatao araka ny fenitra mifandraika voalaza ao amin'ny fifanarahana.
2.1. Pipe seamless dia be mpampiasa. Ny fantsom-pandrefesana tanjona marobe dia vita amin'ny vy vy tsotra sy rafitra firafitra ambany
Mihodina vy, firafitra vy, ny famokarana lehibe indrindra, ampiasaina indrindra amin'ny alàlan'ny fandefasana fantson-drano na ampahany amin'ny rafitra.
2.2 Karazana famatsiana telo arakaraka ny fampiasana azy: A. Famatsiana arakaraka ny firafitry ny simika sy ny toetra mekanika; B. Famatsiana arakaraka ny fahombiazan'ny mekanika; C,
Natolotra tamin'ny fitsapana hydrostatic. Ny fantson-drivotra atolotra ambanin'ny kilasy A sy B dia iharan'ny fitsapana hidrostatik raha ampiasaina hitrandrahana tsindry rano.
2.3 Ny fantson-tsolika tsy misy fotony ho an'ny tanjona manokana dia misy fantsom-pandrosoana tsy misy fantsom-boiler, fantsom-pirazanana ara-jeolojika ary fantsom-pitrandrahana solika.
4.1 Araka ny fomba famokarana samihafa, ny fantsom-by tsy mitongilana dia azo zaraina ho fantsom-panafana mihodina, fantsom-boalavo mangatsiaka, fantsona voatsoaka mangatsiaka, fantsom-panafody sns.
4.2 Misy fantsom-boribory sy fantsona miendrika endrika manokana arakaraka ny bika aman'endriny. Ankoatry ny fantsom-pirazoro sy mahitsizoro dia misy fantsom-boribory koa ny fantsona miendrika manokana, Semicircular, triangular, hexagonal, convex, quint-form, sns.
4.3 Araka ny fitaovana isan-karazany, azo zaraina ho fantsom-pandrafetana karbaona tsotra izy io, fantsom-boaloboka firaka ambany, fantsona firafitra karbona avo lenta sy fitambarana firaka Sodina fananganana, fantsona tsy misy fangarony, sns.
4.4 Araka ny tanjona manokana, misy fantsom-boiler, fantsom-pitantanana geolojika, fantson-tsolika, sns.
5. Famaritana sy kalitaon'ny endrika ivelany
Sodina tsy misy tohika araka ny fepetra GB / T8162-87
5.1. Famaritana: savaivony fantsom-pandrefesana mafana 32 ~ 630mm. Ny hatevin'ny rindrina dia 2.5 ~ 75mm. Fihodinana mangatsiaka (sary mangatsiaka) savaivony 5 ~ 200mm.
Ny hatevin'ny rindrina dia 2.5 ~ 12mm.
5.2 Kalitaon'ny fisehoana: ny faritra anatiny sy ivelany amin'ny fantsom-by dia tsy tokony hisy triatra, vala, horonana, delamination, volom-borona na takaitra.
Mandritra ny taona dia tokony esorina tanteraka ireo kilema ireo ary ny hatevin'ny rindrina sy ny savaivony ivelany dia tsy tokony hihoatra ny fiviliana ratsy aorian'ny fanesorana.
5.3 Ny sisin'ny fantsom-by dia tokony hokapaina amin'ny zoro ankavanana ary esorina ny burrs. Ny fanapahana gazy sy ny fanapahana ny hafanana dia avela ho an'ny fantsom-by misy hatevin'ny rindrina mihoatra ny 20mm
Hetezo izy io, mety tsy tapaka amin'ny fifanarahana eo amin'ny mpividy sy ny mpivarotra.
4.4 Ny kalitaon'ny fantsom-by tsy misy fangarony mangatsiaka voasintona mangatsiaka na mangatsiaka dia hanondro GB3639-83.
Araka ny voalaza ao amin'ny GB2102-88, misy karazana fonosana fantsom-by telo: fametahana, famonosana, fametahana solika na fanangonana menaka. Tube vy dia Tady vy lava miaraka amina faritra poakaty ary tsy misy tadiny manodidina azy. Ny fantsom-by vy misy faritra lava dia be mpampiasa amin'ny fampitana tsiranoka Fantsona iray, toy ny iray izay mitondra solika, entona voajanahary, entona, rano, ary fitaovana matevina sasany. Raha ampitahaina amin'ny vy boribory sy vy mahery hafa, Izy io dia karazana vy miampita ara-toekarena miaraka amin'ny tanjaka sy ny lanjany maivana. Ampiasaina be izy io amin'ny famokarana ampahany amin'ny rafitra sy ny faritra mekanika.
Toy ny fantsom-pitrandrahana solika, zotram-pamiliana fiara, zotram-bisikileta ary scaffold vy ampiasaina amin'ny fanamboarana. Fantsom-by vita amin'ny fantsom-by, Afaka manatsara ny fampiasana fitaovana, manamora ny fizotry ny famokarana, mitsitsy fitaovana sy fotoana fanodinana, toy ny peratra fitondra mihodina, tanany jack, sns.
Amin'izao fotoana izao, ny fantsom-by dia be mpampiasa amin'ny famokarana. Fantsom-by vy na karazana fitaovam-piadiana mahazatra ilaina, barika basy, barika, sns.
Ny fantsom-by dia azo zaraina ho fantsom-boribory sy fantsom-borona miendrika manokana arakaraka ny endrik'ilay faritra miampita. Satria mitovy ny vodin-paritra, ny velaran'ny faribolana
Ny habetsaky ny habe indrindra, ny tsiranoka bebe kokoa dia azo entina anaty fantsom-boribory. Ho fanampin'izany, ny fizarana peratra dia iharan'ny tsindry anatiny na ivelany
Mitovy ny hery, ka fantsona boribory ny ankamaroan'ny fantsom-by.
Na izany aza, ny fantsona koa dia misy fetra voafetra. Ohatra, ambanin'ny toe-javatra iharan'ny fihenan'ny fiaramanidina, ny fantsona dia tsy mahazaka miondrika kokoa noho ny fantsom-by sy ny fantsona mahitsizoro
Ny tanjaka dia lehibe, vatan'ny milina fiompiana vitsivitsy ary ampiharina, fanaka vita amin'ny vy no ampiasaina matetika toradroa, fantsona mahitsizoro. Ireo faritra hazo fijaliana hafa dia takiana araky ny fampiasana samihafa.
Sodina miendrika vy miendrika endrika. Tokony ampifandraisina amin'ny karazany maro izy: fantsona famindrana rano, zavamaniry boiler, injeniera, zavamaniry fanodinana milina.